Ndeapi Mhando dzeWebhu (Rima, Rakadzika, Pamusoro, & Rakajeka)? | Martech Zone
Mugovera, January 2, 2021 NeChishanu, Kurume 5, 2021 Douglas Karr
Hatiwanzotaurirana nezvekuchengetedzwa kwepamhepo kana iyo Dark Web. Nepo makambani akaita basa rakanaka rekuchengetedza maratidziro emukati, kushanda kubva kumba kwakavhura mabhizinesi ekuwedzera kutyisidzira kwekupinda nekubiridzira.
20% emakambani akataura kuti vakatarisana nekutyorwa kwekuchengetedzwa nekuda kwemushandi ari kure.
Kutsungirira kubva kumba: COVID-19 zvinokanganisa kuchengetedza bhizinesi
Kuchengeteka hakuchisiri iro basa reCTO. Sezvo kuvimba iri mari inonyanya kukosheswa pawebhu, zvakakosha kuti vatengesi vekushambadzira vavake kuziva kwavo nezve njodzi pamwe nemabatirwo ehukama hwehukama neruzhinji hunogona kutevedzera kudonha. Zvakare, nezvikwata zvekushambadzira zvinoshanda kure neinokosha data remutengi… mukana wekutyora kwekuchengetedza wakura zvakanyanya.
Mhando dzeWebhu Yakadzika
Iyo Internet yakasarudzika kusarudzika kumatunhu matatu zvichienderana nekuti ruzivo irworwo runowanikwa sei:
Bvisa Webhu kana Pamusoro peWebhu - dunhu reInternet iro vazhinji vedu tinoziva, izvi zviri pachena pamapeji ewebhu ayo anonyanya kuverengerwa pane injini dzekutsvaga.
Zvese izvo isu zvatinogona kuwana pane zvekutsvaga zvinongoita chete kusvika gumi muzana yewebhu.
Yakadzika Webhu - iyo Yakadzika Webhu inzvimbo dzeInternet dzakavanzika kubva kuruzhinji asi dzisina kuitirwa zviito zvakaipa. Yako email, semuenzaniso, ndiyo Yakadzika Webhu (haina kunyoreswa neinjini dzekutsvaga asi inokwanisika zvizere). Kushambadzira SaaS mapuratifomu, semuenzaniso, akavakwa mune yakadzika webhu. Ivo vanoda kusimbiswa kuti vawane iyo data mukati. 96% yeInternet ndiyo Yakadzika Webhu.
Dark Web - mukati me Yakadzika Webhu inzvimbo dzeInternet dzakavanzika uye zvakachengeteka kubva pakuonekwa. Iyo inzvimbo yewebhu uko kusazivikanwa kuchikosha saka kuita kwematsotsi kuri kwakawanda. Yakaputsa data, zvisiri pamutemo mhosva, uye midhiya midhiya inogona kuwanikwa, kutengwa, uye kutengeswa pano. Patova nemishumo yeiyo Mishonga yekudzivirira COVID-19 iri kutengeswa paRima Webhu!
Iyo Rima Webhu Inotsanangurwa
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti Rima Webhu harisi rezvemabasa ematsotsi… zvakare rinopa vanhu simba kuburikidza nekusazivikanwa. Munyika dzinorambidza kutaura kwakasununguka kana kunyatsoongorora kutaurirana kwevagari vemo, iyo Rima Webhu inogona kuve yavo nzira yekusaongororwa uye kutsvaga ruzivo rwusina kuparadzirwa kana kushandiswa nehurumende. Facebook, semuenzaniso, inotowanikwa kuburikidza neRima Webhu.
Chikamu chidiki chete chevashandisi pasi rose (∼6.7%) vangangoshandisa iyo Rima Webhu kune zvinangwa zvakashata pazuva repakati.
mabviro: Izvo zvinogona kukuvadza zveTor kusazivikanwa network sumbu zvisingaenzaniswi munyika dzakasununguka
Mune nyika yakasununguka ine hurukuro yemahara, haisi nzvimbo inofanirwa kuve munhu, zvakadaro. Mumakumi matatu emakore andakashanda pamhepo, ini handina kumbobvira ndave nechido chekushanyira iyo Rima Webhu uye sezvingabvira haizomboiti.
Vashandisi Vanosvika Sei Kune Rima Webhu
Iko kuwanikwa kwakanyanya kune iyo Rima Webhu kuri kuburikidza ne Tor network. Tor ipfupi Onion Router. Tor isangano risingabatsiri rinoongorora nekuvandudza maturusi epachivande epamhepo. Tor mabhurawuza anonyengedza yako yepamhepo chiitiko uye iwe ungatoda kukokwa kuti uwane chaiwo .onion domains mukati meRima Webhu
Izvi zvinoitwa nekuputira kutaurirana kwese munzvimbo dzinoverengeka dzekunyorera dzinotakurwa kuburikidza nemapoinzi enongedzo. Kukurukurirana kweTor kunotanga zvisina kurongeka kune imwe yenzvimbo dzepasirese dzakanyorwa pachena, inobhururuka iyo traffic kuburikidza neakasarudzika akasarudzika epakati relay, uye pakupedzisira inogadzirisa chikumbiro chako uye mhinduro kuburikidza neyekupedzisira nzira yekubuda.
Kune mamwe masayiti ekutsvaga zviwanikwa kunyangwe iyo Rima Webhu. Zvimwe zvinogona kutowanikwa kuburikidza nechimwe chikamu chebrowser… zvimwe zviri Wiki-dhiraini madhairekitori akaunganidzwa nevashandisi. Vamwe vanoshandisa AI kuona uye kusabvisa ruzivo rusiri pamutemo ... mamwe akavhurika kunongedza zvese.
Rima Webhu Kuongorora
Ruzhinji rwematare edzimhosva anotengwa nekutengeswa padandemutande rerima akaputswa madhatabhesi, zvinodhaka, zvombo, uye zvinhu zvekunyepedzera. Vashandisi vanoshandisa crytpocurrency kuita mari yega yega kutengeserana kwakasarudzika uye kusazivikanwa zvakare.
Mabhandi haadi kutsvaga yavo yakaputswa data paRima Webhu ... itsika yePR. Pane kusviba webhu kuongorora mhinduro kunze uko kwemakemikari uye iwe ungangove uri kutotariswa nemamwe masangano kuti ruzivo rwako rwemunhu ruwanikwe.
Muchokwadi, pandakashandisa yangu iPhone kupinda kusaiti uye kuchengeta password yangu neKiyi, Apple wandiyambira apo rimwe remaphasiwedi angu akawanikwa atyora… uye rinokurudzira kuti rishandurwe.
Chengeta yako yese software-kusvika-ikozvino, kwete yako anti-virus software.
Shandisa mapassword akasimba mazhinji - hauna kana password imwechete yezvinhu zvese. A password manejimendi chikuva senge Dashlane inoshanda nemazvo izvi.
Shandisa VPN - yeruzhinji uye epamba nhare dzisina waya dzinogona kunge dzisina kuchengetedzeka sezvaunofunga. Shandisa VPN software kumisikidza yakachengeteka network kutaurirana.
Tarisa zvese zvako zvakavanzika marongero pane ako enhau midhiya maakaunzi uye gonesa maviri-chinhu kana akawanda-factor kupinda mukati kwese kwaunogona
Ini handina kana imwechete yakakosha account iyo ini handifanire kutanga ndaisa password yangu ndobva ndatora yechipiri passphrase yakatumirwa foni yangu kana kutarisa kumusoro kuburikidza neye mobile authenticator app. Izvi zvinoreva kuti, nepo mubatsiri achigona kuwana zita rako rekushandisa nephasiwedi, ivo vanofanirwa kuve nekugona kune yako nharembozha kuti vatore iyo passphrase kuburikidza nemeseji kana chirongwa chechokwadi.
Tsvaga yekuvhara kana HTTPS mune yako browser hwindo - kunyanya kana uri online kunotenga. Icho chiratidzo chekuti une yakachengeteka, yakavharidzirwa kubatana pakati pebrowser yako nekwauri kuenda. Izvi zvinoreva kuti mumwe munhu arikunyura mukati medandemutande traffic yako haakwanise kuona iyo ruzivo iwe yauri kupfuura nekudzoka.
Usavhure kana kurodha zvakabatanidzwa kubva kune asingazivikanwe maemail adhi
Usabate chero zvinongedzo mukati meemail meseji kana iwe usingazive anotumira.
Ita shuwa kuti yako VPN uye firewall inogoneswa.
Iva neyakaiswa-muganho pane yako kiredhiti kadhi yekutengesa online.
Kana iwe uri bhizinesi uye wakanyeverwa nezve kukanganisa kwemashoko uye ruzivo rwuri kuwanikwa paRima Webhu, shandisa a PR dambudziko rekutaurirana zano nekukurumidza, zivisa vatengi vako nekukasira, uye vabatsire kudzikamisa chero njodzi yemunhu.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa zvakabatana maratidziro ekunze masevhisi mune ino chinyorwa.
Tags: vatengesi vemakotoyakajeka webhurima webhuzhayakadzika yewebhupasswordschibatisopamusoro pewebhuhanyanisi networktortor networkmaviri-factor kuvimbisaVpnvpn softwarechiichii chakajeka webhuchii chinonzi rima webhuchii chakadzika webhuchii chiri pamusoro webhu
Kukadzi 10, 2021 na11: 51 PM
Rima Webhu rine ngozi chaizvo chikamu cheInternet